Kaftanka: Isticmaalka habboon ee "sudo" | Laga soo bilaabo Linux
Kaftan: Isticmaal habboon oo ah "sudo"
Waxaan sameeyay majaajilladaan laakiin kama soo bilaabin xoqitaan, waxaan ka helay fikradda meel shabagga ah (ma xasuusto, xusuus xun ayaan qabaa haha) waana sii aqbalsiiyay, waxaan sameeyay xoogaa qabanqaabooyin ah sidaasna way ka yara fiicnayd, halkan waxaan ku arki karnaa muhiimada isticmaalka laga bilaabo «sudo» LOL !!!!
PS: Xiriiriyaha majaajillada asalka ah - » https://www.xkcd.com/149/
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Kuwa kale » Kaftan: Isticmaal habboon oo ah "sudo"
Asalku wuxuu ka yimid qosolka xkcd: https://www.xkcd.com/149/
Waxaan sidoo kale doonayay inaan faallo ka bixiyo naqshaddii asalka ahayd, laakiin horay ayaad u sameysay. Xadhig xkcd aad ufiican, habka.
KZKG ^ Gaara, sadex shax sidaad u sameysay waxay ila tahay aniga wax fiican, si kastaba ha noqotee, dhamaan xargaha xkcd waa shati wadaag wadaag, sidaa darteed waxay ku socotaa iyada oo aan la dhihin waa inaad amaah siisaa abuurayaasha kugu dhiirrigeliyay noocaaga.
In kasta oo aanan anigu aqoonta u lahayn arrimaha ruqsad bixinta (GPL waxay iila muuqataa aniga mid weyn sababta oo ah fudeydkeeda), waxaan jeclahay inaan aqoonsado shaqada dadka kale, gaar ahaan haddii midkeyga ay tahay inuu iyaga la sameeyo. Waxaan ugu yeeray xushmad xirfad leh 😉
Salaan kadib aad baad ugu mahadsantahay faallooyinka, waxaan horey uga bartay wax cusub oo ku saabsan CC haha.
Waxaan ka raali gelinayaa inaanan tixraaca dhigin, waa sidaan idhi ... Ma xasuusto meesha aan ka soo arkay, waxaan horeyba ugu daray iskuxirka boostada sidan oo kale 😉
Salaan iyo mahadsanid wax walba.
hahaha ma xuma, laakiin tani waa ka qosol badan.
Haha sidoo kale sudo waa sidaas oo kale.
Ka taxaddar liisamada aad aadeyso xabsiga haha
Waxaan ku nool nahay dal shatiyada kaliya ee xabsiga kuu galiya ay yihiin kuwa ay bixiso Dowladda. Halkan ma aadaysid xabsi ama EULA, ama GPL, ama mid kamid ah rukhsadaha softiweerka 😛
Haddii aniga ila tahay CC wuxuu umuuqdaa doqon iyo GPL munaafaqnimo
Waan jeclahay BSD ...
Hagaag, mid waliba siduu yahay. Waxaan ruqsad ku siiyaa CC mabda 'ii gaar ah. Haddaanan rumaysanayn hanti-wadaagga, uma oggolaanayo in qofna lacag ka helo alaabtayda, maxaa yeelay waxaan rabaa inay waligeed xor noqoto.
Waxay uraysaa sida dagaalka ololka haddii ay ka sii hadlaan liisamada, aniga gpl wuxuu dammaanad qaadayaa xorriyadaha barnaamijyada bilaashka ah, ma ahan sida kuwa kale ee furan ee aniga ii ah munaafiqiin oo waxaan u arkaa dhammaantood inay yihiin shirqool lagu hagaajinayo softiweerka iyada oo loo mahadcelinayo dameeraha caawiya naftooda, si aan u xiro koodhka dambe, iigu soo yeer khayaano, laakiin rukhsadaha ilaha furan waa kuwo mugdi ku jiro mana aaminsani.
Waxaad hallowday hal shay, furaha sirta ah. Kahor intaadan samayn sanwchid waa inaad dhahdaa pass-ka.
Ku jawaab mahaya
HAHAHAJAJAJA haa, furaha sirtu waxay ahayd inuu ahaado "fadlan" ama wax la mid ah HAHAHA !!!!
Gaara ... waa wax lagu farxo haddii aad sidoo kale ku soo celiso majaajilada websaydhka jasiiradda ...
Ku jawaab elMor3no
GTK + 3.2 waa la heli karaa, iyada oo la taageerayo Wayland iyo HTML5
Tilmaamaha LMDE: Dib-u-eegista Koowaad